Qormo – Garsoore Sports
Marka hore Marca kaddibna RAC1 ayaa raacisay warar sheegaya in xiddiga reer Argentina Lionel Messi uu u sheegay Barcelona inuusan heshiis cusub u saxiixi doonin kooxda. Kaddib Barcelona ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay…
Qudaartii Halista Badneyd Ee Stamford Bridge, Kooxdii 15ka Cayaaryahan Ku Cayaartay & Dhacdooyinka Ugu Layaabka Badan Ee Kubadda-cagta
Taariikhda isboortiga ugu caansan adduunka waa mid cajiib ah. Qarniyo ayaa kasoo wareegtay markii la bilaabay isboortiga aan hadda ugu yeerno kubbadda-cagta (ama wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeerto), taniyo markii la bilaabayna,…
Kaddib markii la kansalay kii sannadkii hore ee 2020, Ballon d’Or waa uu soo laabtay, iyadoo xiddigaha ugu wanaagsan caalamka ay markale indhaha ku hayaan abaalmarinta shaqsiyadeed ee ugu weyn ee kubbada-cagta. Inkastoo abaalmarinta aan…
8 Xaqiiqo Oo Macquul Ah Inaadan Ka Ogeyn Nolosha Lionel Messi
Lionel Messi waa mid ka mid ah magacyada ugu caansan adduunka, waxaa dad badani ay u tixgeliyaan inuu yahay cayaaryahankii ugu fiicnaa taariikhda kubbada cagta, waxaana uu xiddigan haatan waqti quruxbadan xulkiisa Arjentina kula qaadanayaa…
Cayaaryahanka kooxda Stuttgart ee Silas Wamangituka ayaa shaaca ka qaaday in magiciisa dhabta ah uu yahay Silas Katompa Mvumpa, isagoo sheegay inuu ku cayaarayay aqoonsi been abuur ah oo uu siiyay wakiilkiisii hore. Silas, oo…
Waxay ku asteysantahay mid kamid ah xaaladihii ugu layaabka badnaa taariikhda kubbada-cagta, laakiin maxaa dhab ahaantii maalintaasi xasuusta leh kadhacay magalaada Somerset ee Koonfur Galbeed Waddanka Ingiriiska? Waxay ahayd cayaar u dhaxaysay kooxaha Cross Farm…